(tonga teto avy amin'ny Jesosy Kristy)
I Jesoa na Jesosy na Jeso dia Jiosy tany Palestina izay inoan' ny Kristiana ho zanak' Andriamanitra nirahina ho ety ambonin' ny tany hanavotra ny olombelona tamin' ny alalan' ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray. Izy no foto-pisian' ny Fivavahana kristiana. Ny fivavahana jiosy dia manao an' i Jesoa ho olona fotsiny fa tsy Andriamanitra na zanak' Andriamanitra akory aza. Ny fivavahana silamo dia mihevitra azy ho mpaminany sahala amin' ny mpaminany Mohamady.
Ny Kristiana dia mino fa zanak' Andriamanitra i Jesoa nefa ny fiangonana tsirairay dia samy manana ny fomba fampianarany . Ny taranja teolojika ianarana sy andinihana ny amin'izany dia ny kristolojia (izay momba ny toetr' i Jesoa ampifandraisina amin'Andriamanitra sy amin' ny olona). Ny fahasamihafan' ny finoana an' i Jesoa dia isan' ny niteraka ny fanaovana kônsily (fivorian' ny eveka atao mba hanapahan-kevitra momba ny finoana sy ny fandaminana ny Fiangonana) sy nahatonga ny fandraiketana ireo fanekem-pinoana voalohany. Izany ihany koa no anisan' ny sivana nisafidianana ny boky kanônika ao amin' ny Baiboly.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesoa&oldid=1010351"
Voaova farany tamin'ny 27 Martsa 2021 amin'ny 12:34 ity pejy ity.